मतदान भोली : के-के गर्न पाइँदैन ? « रिपोर्टर्स नेपाल
मतदान भोली : के-के गर्न पाइँदैन ?
प्रकाशित मिति : 2017 May 13, 7:12 am
काठमाडौं ३० बैशाख । कुनै मतदाताले मतदानपछि मतपत्र कसैलाई देखायो भने के हुन्छ ? झुक्किएर पनि त्यसो नगर्नुस् । मतदान अधिकृतले त्यस्तो मतदातालाई तत्कालै १५ हजारसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछन् ।